स्वस्थ रहन गर्मीमा कस्तो खाना खाने ? - पब्लिक पाेष्ट
काठमाडौँ । जाडोको तुलनामा गर्मी मौसम रोगका लागि जोखिम मानिन्छ। विशेषगरी छालाजन्य तथा पेटजन्य रोगका लागि। स्वस्थ रहन व्यायाम जस्तै खानाको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ। यदि खाना स्वस्थ भएन भने सिधै पाचनप्रणालीमा असर गर्छ।
गर्मीमा विशेष दूषित पानी र दूषित खानाले धेरैजसो रोग लाग्ने गर्छन्। तसर्थ यो मौसममा सफा र ताजा खानामा जोड दिनुपर्ने सुझाव पोषणविद्को रहेको छ। टिचिङ अस्पताल महाराजगन्जकी पोषणविद् नानीशोभा शाक्यका अनुसार गर्मीमा शरीरलाई जाडाको तुलनामा कम खानाको आवश्यकता पर्छ।
यो मौसममा जाडाको तुलनामा शरीरको बिएमआर (शक्ति) कम खर्च हुन्छ। यस कारण शरीरले जाडोमा जस्तो गर्मीमा बढी खानाको माग गर्दैन। तर शरीरबाट पसिना बढी बगेर जाने र घामको तापकाले शरीरमा पानीको मात्रा भने केही बढी चाहिन्छ। यो आवश्यकतालाई नबुझेर कतिपय मानिसले कमजोरी महसुस पनि गर्छन्।
जुस या पानी खानैपरे दैनिक एक/दुईवटा फलफूल खान सकिन्छ। यसैगरी काँक्रा, खरबुजा, मूलाजस्ता फलफूल तथा सलाद पर्याप्त मात्रामा खान सकिन्छ। एउटा मानिसले दैनिक एक पाउसम्म खान सक्छन्।
एसइई पूरक परीक्षा : बाेर्डले सार्वजनिक गर्‍यो नयाँ परीक्षा मिति
सुनको मूल्य घट्यो, हेर्नुस् कति पुग्यो ?
आर्थिक संकटले श्रीमतीको उपचार गराउन पाएनन् महराले
April 11, 2018 संवाददाता
कलेजाेको समस्या भए अब आफैँ थाहा पाउनुस्
September 2, 2018 EP EDITOR
December 8, 2018 December 8, 2018 EP EDITOR